WhatsApp Pay Apk Download ho an'ny Android [vaovao 2022]
March 7, 2022 Janoary 14, 2022 by Reyan Ahmad
Fantatrao ve ireo endrika farany nohavaozina an'ny WhatsApp? Raha tsy izany dia eo amin'ny toerana mety ianao hahalalana izany. Ny fiasa farany nohavaozina dia fantatra amin'ny hoe WhatsApp Pay Apk. Io no fiasa farany, izay manome vola mandefa sy mandray. Manome serivisy maimaimpoana izy io, izay tsy mampihena vola na mampihatra fiampangana.
Mivoatra haingana ny teknolojia eto amin'izao tontolo izao, izay manome fomba fiaina mora kokoa. Misy gadget isan-karazany, izay ampiasain'ny olona amin'ny asany andavanandro ary mamita ny asany mora kokoa sy marina kokoa. Toy izany koa, ny fitaovana Android dia nanamora zavatra maro ho an'ny mpampiasa.
Misy zavatra maro isan-karazany, izay azonao idirana mora foana amin'ny alalan'ity fitaovana ity. Betsaka ny rindranasa azo ampiasaina amin'ny fitaovana Android, izay ahafahan'ny mpampiasa miditra amin'ny angona tiany na mahasoa rehetra. Toy izany koa, WhatsApp dia fampiharana Android, izay nampiasain'ny olona hifandraisana.
Izy io dia rindranasa misy fampiasa maro, izay manome fifandraisana, fiaraha-monina, fizarana data, ary maro hafa. Ka amin'izao fotoana izao dia mampiditra endrika hafa ho an'ireo mpampiasa izy io, izay ahafahan'izy ireo miditra amin'ny fomba mora ny rafitra fandoavam-bola. Misy fampahalalana amin'ny antsipiriany bebe kokoa azo jerena etsy ambany, jereo fotsiny io.
Topimaso momba ny WhatsApp Pay Apk
Izy io dia fampiharana ara-tsosialy sy fifandraisana Android, izay manome ny endri-javatra vaovao farany amin'ny serivisy fandoavam-bola. Izy io dia manome ny mpampiasa hampiditra ny kaontiny any amin'ny banky ary mandefa sy mandray vola mora foana. Manolotra tolotra fandoavam-bola an-tserasera tsara indrindra izy io.
Izy io dia manome ny mpampiasa hampiditra kaonty banky samihafa, izay ahafahan'izy ireo miasa mora amin'ny fandoavam-bola. Tsy manome karazana rafitra kaonty manokana izany. Izy io dia manome fomba tsotra fotsiny, izay ahafahan'ny olona miditra mora foana amin'ny serivisy fandoavam-bola hafa, izay misy ny kaonty amin'ny banky.
Noho izany, mila manampy ny kaontiny amin'ny banky amin'ity fampiharana ity ny mpampiasa. ny Wallet nomerika dia dingana tsotra hanampiana kaonty banky, miaraka amin'ny WhatsApp Payment Apk. Mila miditra amin'ny toe-javatra fotsiny ianao ary manokatra ny fomba fandoavam-bola. Izy io dia hanome anao ny endri-javatra hanampiana ny kaontinao amin'ny banky.
WhatsApp UPI Apk dia hiditra ho azy ny kaonty banky rehetra, izay alefa amin'ny fitaovanao. Mila misafidy ny kaonty tianao hampiana fotsiny ianao. Noho izany, matetika ny olona dia mieritreritra momba ny kaonty izay handraisany ny vola na avy amin'ny kaonty handefasana ny fandoavam-bola.
Noho izany, raha manampy kaonty marobe ianao dia mila misafidy kaonty voalohany. Ny vola voaray rehetra dia ampidirina ao amin'ny kaontinao voalohany. Saingy raha mandefa ny vola ianao dia hanome anao ny kaonty rehetra ny WhatsApp Pay Version. Noho izany, tsy maintsy misafidy ny banky amin'ny tanana izay tianao handefasana ny vola ianao.
Io no fomba tsara indrindra sy mora indrindra, ahafahanao mamita ny fandoavam-bola mora foana. Saingy amin'izao fotoana izao, misy ny kinova bête, izay tsy ho an'ny mpampiasa sasany ihany. Fa raha te hampiasa ny WhatsApp Pay Beta Apk ianao dia eto ho anao rehetra izahay.
Hozarainay aminareo rehetra ny rohy, izay ahafahanao mahazo mora foana ny kinova farany. Afaka mampiasa mora foana ny endri-javatra farany rehetra an'ny WhatsApp Beta Apk ianao ary mankafy ny serivisy fandoavam-bola mora indrindra. Noho izany, raha manana olana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
anarana Mandoa Whatsapp
Size 46.54 MB
Anaran'ny fonosana com.whatsapp
Rafitra fandoavam-bola tsara indrindra
Tantano ny kaonty amin'ny banky marobe
Mora ny mahazo vola famindrana amin'ny banky rehetra
Ny fomba haingana sy azo antoka amin'ny famindrana vola
Tsy misy serivisy Wallet
Izahay dia hizara ny kinova beta aminareo rehetra, amin'ny alalàn'izany dia hidiranao amin'ny fidirana mora foana amin'ireo fisehoan-javatra misy an'ity fampiharana ity. Noho izany, tadiavo ny bokotra fampidinana ary manaova paompy tokana eo amboniny. Hanomboka ho azy ny fisintomana rehefa vita ny paompy.
Ahoana ny fampiasana WhatsApp Pay?
Vantany vao apetrakao amin'ny rindrambaiko ity kinova ity dia mila manokatra fampiharana fotsiny ianao. Tokony ho hitanao ilay olona tianao alefa ilay vola. Mandehana mankany amin'ny bokotra Clip ary ho hitanao ny kisary fandoavam-bola, avy eo paompy fotsiny izy dia mila mifidy ny bankinao ianao.
Mila mampiasa ny isa mitovy ianao, izay nampiasaina tamin'ny antsipirian'ny banky. Noho izany, raha handefa vola ianao dia mila mifidy ny fomba fandoavam-bola ary soraty ny habetsaky ny vola. Azonao atao mihitsy aza ny manoratra naoty na hafatra miaraka aminy ary mandefa azy fotsiny.
WhatsApp Pay Apk no fampiharana tsara indrindra ho an'izay manao fandoavam-bola haingana sy mora. Noho izany, misintona fotsiny ity fampiharana ity ary midira ny serivisy farany rehetra. Raha manana fanontaniana ianao amin'ny fampiasana ity fampiharana ity dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Sokajy Apps, Fifandraisana Tags Wallet nomerika, WhatsApp Pay Apk, WhatsApp Payment Apk, WhatsApp UPI Apk Post Fikarohana
Ruok FF Auto Headshot Apk Download Ho an'ny Android [Tara]
AePDS App Download maimaim-poana ho an'ny Android